Shirkii EPRDF Oo Maanta Furmay, Madaxwaynaha DDSI Iyo Dawlada Fedraalka Oo Dhagaxdhigi Doona Warshad Sonkor Iyo Jaamacad Labaad Oo Deegaanka Ah. - Cakaara News
Shirkii EPRDF Oo Maanta Furmay, Madaxwaynaha DDSI Iyo Dawlada Fedraalka Oo Dhagaxdhigi Doona Warshad Sonkor Iyo Jaamacad Labaad Oo Deegaanka Ah.
Addis Ababa(CN) Sabti.April.04.2015, shirkii caadiga ahaa ee EPRDF ayaa maanta kafurmay xarunta dalka ee Addis Ababa kaasoo lagaga hadlayay waxqabadka gaar ahaan xafiisyada horumarka iyo qorshayaasha xukuumada iyo xisbigaba. Sida aad wararkanagii hore kala socoteen CakaaraNews waxaa shirkan lagaga hadlayaa waxqabadka horumarineed iyo sidii loo sii wadi lahaa horumarka loona hirgalin lahaa qorshayaasha soo socda. Waxaana shirkan ka qayb galaya madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo Afhayeenka baarlamanka DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI.
Shirkan caadiga ah ee EPRDF oo lagaga hadlayo arimo badan oo waxqabadka horumarka dalka ah iyo qorshayaasha cusub ee yoolasha lahiigsanayo ee ay xukuumada federaalku hogaaminayso ayaa waxaa markii hore sidoo kale shirar soo yeeshay gudiyada fulinta ee xisbiga EPRDF.
Hadaba mar ay galabta Cakaaranews laxidhiidhay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo maal mahanba siduu dibada ugasoo laabtay ku mashquulsanaa mashaariicaha waawayn ee GTP-2 ee dalka iyo xafiisyada horumarka ee dawlada dhexe iyo waxa loogu tala galay DDSI gaar ahaan gudiga u qaabilsan ayaa carbka ku dhuftay mashaariicda waawayn ee DDSI laga hirgaliyo wareegii labaad ee qorshaha isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha ee shanta sano ee dalka.
Waxaana kamida mashaariicdan waawayn ee deegaanka laga hirgalinayo 1) warshada sonkorta 2) biyo xidheenka 3) wadooyinka laamiga ah oo ay kamid tahay wadada Godey ilaa Ferefer 4) Jaamacad labaad oo mida Jigjiga oo kale ah 5) wax kaqabashada biyaha iyo kuwo kale.
Dhanka kale wuxuu madaxwaynuhu shaaca kaqaaday in wakhti dhaw oo toddobaadyo ah ladhagax dhigi doona islamarkaana labilaabayo warshada Sonkorta oo maalinkii soo saari doonta kumaan kiintaal oo sonkor iyo jaamacad labaad oo deegaanku leeyahay islamarkaana awood u leh in ay qaabaisho in kabadan 20,000 (labaatan kun oo arday oo si regular ah ugu xaroota).
Sidoo kale madaxwayne Cabdi Maxamuud waxaa ay hada kawada hadleen laydhka magaalada Godey oo daahay iyadoo sidoo kalena laga wada hadlay bilaabista laydhgalinta magaalada Dhagax buur iyo magaalada Qabridahar. madaxwaynaha oo siduu dibada uga yimid wali ku mashqqulsan hawlaha shirarkan horumarineed, ayaa u hanbalyeeyay DDSI guulaha horumarineed iyo shirkii dibada guulaha lagasoo hoyiyay. Sidoo kale waxaa maal mahan aad looga hadal hayaa magaalada Addis Ababa shirkii dibada ee Caano Kadhan iyo guushii isbadal ee kasoo hoyatay.
Golaha dhexe ee EPRDF ayaa hoosta kaxariiqay in deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kataabo gashay nabadgaliyada iyo horumarka oo kahanaqaaday taasina ay u baahantahay in horey loo sii wado. Sidoo kale inuu guud ahaanba dalku kamid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.
Hadaba guulahan mashaariicaha waayan ayaa DDSI u soo hoyatay iyadoo toddobaadkana lafilayo in ay guddi aqoonyahan ah oo uu hogaaminayo xafiiska maaliyadu in ay golaha Capinetka DDSI u soo bandhigaan qorshihii shanta sano ee soo socota ee deegaanka.
Shirkan maanta furmay oo lafilayo inuu ilaa barito sii socdo ayaa lagaga hadlayaa arimo badan oo dhanka horumarka ah gaar ahaan mashaariicaha waawayn sidii ay u qabsoomeen iyo qorshayaasha horumar ee dalka ee ay xukuumada dhexe hogaaminayso. Hadaba warbixinta shirkan ayaa sheegaysa in laga makhraati kacay waxqabad badan oo xukuumada ah islamarkaana loo baahanyahay in lasii wado.
Maamulka Cakaara, Shaqaalaha dawlada iyo qaab dhismeedyada kala duwan ayaa aad u bogaadinaya shirkan EPRDF go'aamada kasoo baxay iyo mashaariicaha waawayn ee horumarineed ee dalku ku gaadhayo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.